I-EXTREME Eno inkampu ukusuka kwi-100 'kwi-Christian Co - KY
Thatha inkampu yakho ye-hammock ukuya kwinqanaba elilandelayo ngokuxhoma kwi-100' kwaye ujabulele impepho ngelixa uphumle. Zisa yonke i-crew kwaye uxhome abaninzi kangangoko ufuna ngaphandle kwamacala kuwo nawuphi na umgangatho, nje i-$ 15 kundwendwe ngalunye olongezelelweyo. Iimbono ezimangalisayo !! Uphononongo lulungile kakhulu, kodwa iindwendwe ezimbalwa ziye zaphawula ukuba indawo incinci kunentengiso. Uluhlu lolweentlobo ezinomdla ezifuna ikhempu ye-hammock; ukuba i-tower cab ingaphezulu into yakho ilungile, kodwa ayilogumbi lehotele.
Eyona ndawo iphakamileyo kulo lonke ilizwe. Ubuncinci ubusuku obu-2. Zininzi iindawo zokumisa iintente emhlabeni ngokunjalo. Andazi ukuba ingakanani na isayizi yetower cab, kodwa ukuba uyikati eyoyikayo kwaye awukwazi ukumelana nokuxhwilwa ngaphandle, wamkelekile ukuba uhlale ngaphakathi. Ukuba bekufuneka ndiqikelele bendizakuthi ngu 8' x 8' square phezulu ngaphakathi kwekhebhu. Oku kusingathwa kokwabantu abanomdla kwinkampu engoyikiyo iindawo eziphakamileyo. INGCACISO: Itower cab ayilogumbi lasehotele. Kusenokubakho unomeva ngamaxesha athile angena apho, ke jongana nawo. Kukho amandla e-120v AC kwi-cab ukuze ii-techies zikwazi ukutshaja iifowuni zabo. Ukuba umbane ucinyiwe ngenxa yesizathu esithile, sisiqhekeza nje kwisiseko senqaba esifuna ukusetwa kwakhona. IMFIHLO: Ukuba ujonge eMantla ungajonga ifama yeehektare ezili-1000 yinkwenkwezi yomculo welizwe eyaziwa kakhulu evela eNashville. Andizukutsho ukuba ngubani esidlangalaleni, kodwa xa ungena siza kukuxelela ukuba uyabuza. Yiza neebhayinotyhulathi zakho. Kuyabonakala ukuba oku kuyaphoswa, kodwa kukho iprivy kwipropathi enokusetyenziselwa indawo yokuhlambela.
Cwaka, ngokuqinisekileyo ifihliwe. Ngokusisiseko ungqongwe ziihektare ezili-10,000 zamaplanga eNorth Christian County. Musa ukumangaliswa xa ubona amakhulu okanye amaxhama kunye ne-turkey. Akuvumelekanga ukuzingela nangona kunjalo.
Abantu bam ngabona bangabamkeli kunye nabamkeli balo mhlaba. Ndibadwelisa nje. Ukuba ufunda uphononongo, wonke umntu okhe wadibana nabo ucinga ukuba ngabona bapholileyo. Ityuwa yehlabathi bantu; ukuba uyakhathala ukunxibelelana bangathanda ukutshintshiselana ngamabali.
Abantu bam ngabona bangabamkeli kunye nabamkeli balo mhlaba. Ndibadwelisa nje. Ukuba ufunda uphononongo, wonke umntu okhe wadibana nabo ucinga ukuba ngabona bapholileyo. Ityuwa yeh…